5ta kulan ee ugu fiican Sonic ee Android | Androidsis
Sonic waa mid ka mid ah astaamaha ugu caansan adduunka ee ciyaaraha fiidiyowga, oo leh Classics ka soo bilaabmay 90 -meeyadii goobo badan sida Nintendo, Play Station, Xbox iyo kombiyuutarro. Sidoo kale waa kartoon aad loo jecel yahay oo adduunka oo dhan ah, labadaba taas iyo tan koowaadba waa inay leedahay saldhig taageere oo aad u ballaaran. Taasi waa sababta aan hadda kuugu soo bandhignay qoraalkan ururinta, oo aan kugu liis gareyneyno Ciyaaraha Sonic ee ugu fiican AndroidMaaddaama ay jiraan dad badan oo ku jira Dukaanka Play -ka si ay isugu caweeyaan oo ay uga caawiyaan geedka xawaaraha sare leh inuu ka adkaado ragga xun.
Hoos waxaad ka heli doontaa taxane ah cayaaraha ugu fiican Sonic ee taleefannada casriga ah ee Android. Waxaa xusid mudan, sida aan had iyo jeer sameyno, taas dhammaan kuwa aad ka heli doontid qoraalkan uruurinta waa bilaash. Sidaa darteed, uma baahnid inaad foorjirto wax lacag ah si aad u hesho mid ama dhammaantood.
2 Sonic ee Dhirta-Geed-Yaraha
3 Sonic CD-ga caadiga ah
5 Ciidamada Sonic: Speed ​​Speed
Si aad ugu bilowdo cagta midig, waxaan haysannaa Sonic Dash, oo ka mid ah cayaaraha ugu caansan Dukaanka Play -ka oo aan ahayn kaliya ciyaaraha Sonic. Magacani wuxuu ku faanaa 100+ milyan oo la soo dejisto dukaanka wuxuuna leeyahay sumcad 4.6-xiddig ah oo ixtiraam leh, taas oo ku saleysan ku dhawaad ​​5 milyan oo dib u eegisyo iyo qiimeyn togan.
Sonic Dash waa ciyaarta caadiga ah taas oo waxaad haysataa daraasiin adduunyo iyo heerar, midba midka kale ka adag yahay oo leh curiyeyaal iyo carqalado kala duwan. Midkani wuxuu leeyahay mowduuc la mid ah Temple Run iyo Subway Surfers, laba ciyaarood oo kale oo leh dhaqdhaqaaqyo isku mid ah.
Waxaa jira xaalado badan, dhammaan 3D iyo sawirro firfircoon oo si fiican loo shaqeeyay. Istaraatiijiyaddu waxay tahay in lala ordo Sonic oo laga dhigo inuu boodo, ka leexdo oo siibto si uu uga fogaado wax kasta oo uu ka gudbi karo tan, haddii uu sameeyo, wuu lumin doonaa. Warka fiicani waa inaad dib u bilaabi karto meeshii aad ka tagtay, laakiin had iyo jeer maahan. Taas awgeed waa inaad haysataa nolol iyo fursado kale. Soo hel oo soo ururi dhammaan qadaadiicda iyo xirfadaha jidka ku jira oo ka gudub dhammaan heerarka sida orodka ugu dhaqsaha badan dhammaan.
Isticmaal awoodo kala duwan iyo isku -darka si aad ugu guuleysato adduun kasta; adeegso weerarada diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo noqda kuwa aan la burburin karin oo aan laga adkaan karin. Waxaad sidoo kale leedahay jilayaal kala duwan sida Dabo, Hooska iyo Jilbaha, kuwaas oo ah saaxiibada ugu dhow Sonic. Sidoo kale, sidee ku noqon kartaa haddii kale, waxaa jira madaxyo dhammaadka adduunyada oo, dabcan, ay adag tahay in laga adkaado, marka waa inaad u diyaargarowdaa inaad wajahdo.
Ciyaarta dhexdeeda waxaad kaloo iibsan kartaa oo heli kartaa awood-korodhsi taas oo loola jeedo inay kaa sii qaadaan xitaa intii aad ka maqnaan lahayd. Waxa kale oo aad heli kartaa bilow bilow ah, gaashaammo, birlabyo, iyo gooldhaliyayaal.
Dhinaca kale, caajisku marnaba kuma dhaco Sonic Dash for Android; waxaad awoodi doontaa inaad naftaada ku maaweeliso ergooyinka oo aad ka adkaato si kor loogu qaado dhibcaha isku dhufashada iyo / ama ku guuleysto abaalmarino cajiib ah.
Sonic Dash - Ciyaarta Orodka
Sonic ee Dhirta-Geed-Yaraha
Sonic the Classic Hedgehog waa ciyaar madal oo aad u xiiso badan taasi waxay dib noogu celinaysaa 90 -meeyadii iyo horraantii 2000 -meeyadii iyada oo ay ugu mahadcelinayaan garaafyadeedii hore iyo dhaqdhaqaaqyadii xilligaa. Cinwaankan SEGA wuxuu u yahay qofkii ugu xumaa shar iyo qallooc Dr. Eggman, oo ay tahay inaad kaga adkaato Sonic, laakiin ka hor intaadan ka adkaan dhammaan adduunyada iyo heerarka jira.
Dr. Eggman wuxuu doonayaa inuu helo toddobada fawdo Emeralds si uu ugu dambayn u dhammaystiro hubkiisa ugu dambeeya, Beedka Dhimashada. Tan wuxuu rabaa inuu ku qabsado adduunka, wax uu si fudud ku gaari lahaa isla marka la dhammeeyo. Ujeeddadu waa in laga hortago inay taasi dhacdo, laakiin tan waa inaad ka gudubtaa caqabadaha oo dhan, qabsataa dhammaan qadaadiicda badan iyo abaal -marinta ciyaarta oo aad gaarto dhammaadka adduunka si aad isaga wajahdo oo aad isaga adkaato dagaal laba geesood ah , taas oo aan ahayn wax fudud.
Ciyaartan, inkasta oo ay leedahay qaab gadaashiis ah, waxay leedahay heerka cusbooneysiinta ee 60 Hz. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay habab badan, oo ay ka mid yihiin contrarrelok. Waxaad sidoo kale ku leedahay saaxiibo dhowr ah Sonic, waxayna yihiin Sonic, Dabo iyo Jilbaha; iyaga waxaad ku adeegsan kartaa kartiyo iyo awoodo kala duwan sida duulimaadka, fuulitaanka iyo ku -simidda heerarka.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka iyo astaamaha ciyaartaan waa taas ku cayaar kontaroolada dibadda adiga oo adeegsanaya Bluetooth. Waxay la jaan qaadi kartaa xakameeyayaasha HID, sida MOGA oo ka socda Awoodda A, Nyko iyo Xbox.
Sonic the Hedgehog ic Classic
Sonic CD-ga caadiga ah
Cinwaan kale oo fiican oo SEGA ah oo lagu daray riwaayadiisa ciyaaraha Sonic ee ku yaal Dukaanka Play -ka ee mobilada Android waa Sonic CD Classic. Midkan sidoo kale waxaa loo dejiyay qaab gadaal, sidaa darteed garaafyadeeda ayaa xoogaa la isku dhejiyay si ay run ugu noqoto bilowga cayaaraha Sonic.
Ciyaartaan waa inaad heshaa oo heshaa toddobada Time Stones si aad uga adkaato Dr. Eggman una badbaadiso Amy Rose. U adeegso dabaylaha Sonic ee dabaysha iyo loop -ka sare si aad u nadiifiso heerarka sida ugu dhakhsaha badan uguna soo laabato waqtiga si aad ugu raaxaysato noocyadii hore, hadda iyo mustaqbalka ee heer kasta. Hadafkaagu waa inaad furto Miles "Dabo" Prower. Intaa waxaa sii dheer, waa inaad ka adkaataa Dr. Eggman oo aad la dagaallanto abuurkiisa ugu naxdinta badan, kaas oo ah Metal Sonic, nuqul ka mid ah Sonic oo leh awoodo isku mid ah, sidaa darteed runtii aad buu u xoog badan yahay, oo dhanna, waa dhakhso.
Madadaalada waxaa lagu damaanad qaadayaa adduunyo iyo dhacdooyin kala duwan, mid walbana waa ka adag yahay kan kale oo leh sawirro wanaagsan oo ku qaadan doona dhowr sano oo la soo dhaafay. Ciyaartan waxay leedahay iibsasho gudaha ah iyo culeys qiyaastii 25 MB ah, marka waa wax fudud. Taa baddalkeeda, waxay durba ku uruurineysaa in ka badan 10 milyan oo la soo degsado Dukaanka Play.
Sonic The Hedgehog 2 Classic waa nooc cusub oo ka mid ah ciyaarta asalka ah, laakiin sidoo kale ciyaartan waxaan ku haynaa sawirada retro kii hore. Oo waa cinwaankan waxaan ku leenahay madal aad u xiiso badan oo ay tahay inaad ka caawiso Sonic inuu ka gudbo dhammaan caqabadaha iyo dhibaatooyinka heerarka ay tahay inuu ku ordo oo uu dhakhso u gaaro dhammaadka mid kasta oo, sidaas darteed, hel oo ay ka adkaadaan Dr. Eggman, oo raba inuu helo toddobada fawdo Emeralds si uu ugu dambayn u dhammaystiro hubkiisa ugu dambeeya, Beedka Dhimashada.
Ciyaartan waxaad sidoo kale ku xisaabtami kartaa labada saaxiib ee ugu dhow uguna dhow ee Sonic, kuwaas oo ah Dabo iyo Jilbaha, xulafadiisa ugu xoogga badan. Kuwani waxay kaa caawin doonaan inaad u gudubto ciyaarta ilaa dhammaadka si aad u gaarto hawsha.
Waxaa jira dhowr iyo toban goobood oo Badnik ah oo ay ku dhex mushaaxaanLaga soo bilaabo godadka biyaha hoostooda ilaa casinos neon-lit oo leh garaafyo maanka ku haya. Waxaad sidoo kale ku tartami kartaa khadka tooska ah oo aad ku ciyaari kartaa habka Weerarka Waqtiga iyo qaabka weerarka madaxa. Midda kale waa inaad la dagaallanto hal -abuurka Dr. Eggman, sida cabsida badan ee Mecha Sonic, dabeecad leh karti la mid ah Sonic, laakiin shar leh.
Mid ka mid ah yoolalkaaga ugu waaweyn ayaa ah hel dhammaan Emerald -yada Fowdada ah si aad ugu beddesho Super Sonic iyo jilbaha Super iyo, sidan oo kale, noqo guuleyste. Ha u ogolaan sharka Dr. Eggman inuu ka fogaado.
Ciidamada Sonic: Speed ​​Speed
Si aan u dhammaystirno qoraalkan soo -ururinta ee ugu wanaagsan ciyaaraha Sonic ee Android, waxaan leenahay Xoogagga Sonic: Battle Speed mid ka mid ah ficillada iyo cayaaraha orodka leh garaafyada ugu fiican dhammaan Dukaanka Play. Waana tan tan cinwaanka waa inaad noqotaa mid aad u tartanta haddii aad rabto inaad noqoto kan ugu fiican, maadaama aad awoodi doonto inaad ka hortagto ciyaartoy ka kala socota adduunka oo dhan, kuwaas oo ay horeba u jireen kuwo badan oo xirfad leh oo aan is oggolaan doonin si fudud lagu guulaysan karo.
Isku day inaad noqoto kan ugu fiican oo dooro dabeecada aad ugu jeceshahay; sida aad u leedahay Sonic, waxaad heli kartaa Sonic, Amy, Dabo, Jilbaha, Hooska, Rouge iyo qaar kaloo badan. Jinsiyadaha waxaad ku riixi kartaa kuwa kale caqabadaha iyo badniks -ka waxaadna ku weerari kartaa miinooyinka, hillaaca, kubbadaha dabka, duufaannada iyo kuwo kaloo badan, dhammaantood si aad u hesho koobab si aad u furato jidad cusub oo adag.
Waxaad sidoo kale furi kartaa jilayaal cusub oo la yaab leh, sida Omega ama Vector, si aad u qabato oo aad ugu tartanto siddooyinka tartan kasta si aad u hagaajiso. Tan kale waa inaad fulisaa ergooyinka; waxaa jira dhowr si looga gudbo.
Ugu dambeyntiina, Sonic Forces: Battle Speed ​​waxay leedahay wax ka badan 50 milyan oo laga soo dejisto Dukaanka Play waxayna leedahay qiimeyn xiddig 4.5 ah. Waxa kale oo uu culeyskiisu yahay ilaa 40MB, taasoo ka dhigaysa mid fudud.
Xoogagga Sonic - Ciyaarta Orodka
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Ciyaaraha Android » 5ta kulan ee ugu fiican Sonic ee Android